“နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အကြံပြုတင်ပြချက် (၁)” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » “နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အကြံပြုတင်ပြချက် (၁)”
“နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အကြံပြုတင်ပြချက် (၁)”
Posted by asiamasters on Mar 1, 2013 in Ideas & Plans | 14 comments
ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်မှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်သူများအနေနှင့် အကြံပြုကြပါရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ (၂၈) ရက်နေ့ တွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး Facebook မှ တရားဝင်ဖေါ်ပြလာပါသဖြင့် နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အကြံပြုတင်ပြချက်များကို စတင်ရေးသားသည်။ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု၏ စွမ်းဆောင်ရည် နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသူ/နိုင်ငံသားတို့မှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအကြံပြုနိုင်သဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ၀န်ထမ်းများအားလုံးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တို့သည် အများပြည်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိစေမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
တကယ်တမ်းအားဖြင့် ယနေ့နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်ပေါ်ထွက်လာသည့် ကာလအတွင်း ကောင်းမွန်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတို့ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော်လည်း၊ အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများမှာ အမြီးကျက် အမြီးစား၊ ခေါင်းကျက် ခေါင်းစား ၀ိသမလုပ်ငန်းရှင်လေးများ၏ အဆင့်အတန်းလောက်သာရှိနေပါသေးသည်။ အရေးတကြီးအမြန်လုပ်ရမည့် တစ်ချို့အလုပ်များမှာ စပင် မစရသေးပါ။ တစ်ချို့လုပ်ငန်းများမှာ မူဝါဒမရှိပါ။ တစ်ချို့လုပ်ငန်းများမှာ အယူအဆပိုင်း Concept များပျောက်နေပါသည်။ (၂) နှစ်တာကာလအတွင်း ထိုမျှလောက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကို ပင်အလွန်ကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ တစ်ပါတီအုပ်ချုပ်သည့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ် (Socialism) ကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ Socialism ကိုကျင့်သုံးသည့်အတွက် Economics System ကလည်း Socialism အယူအဆကိုကျင့်သုံးပါသည်။ အများပြည်သူတို့ရဲ့ Education System ကိုလည်း အဆိုပါ Socialism နှင့် Socialist Economy တွင် အသုံးဝင်ရန်အတွက်သာ ရေးဆွဲသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ်အယူဝါဒ လူအများကြားစွဲမြဲခိုင်မာစေရန် Politicial Sciences ဘာသာရပ်များနှင့် ဗဟိုနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်တို့ကို ထူထောင်ပြီး ၀ါဒဖြန့်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဆိုရှယ်လစ်အယူဝါဒကြီးမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ်လူထု အုံကြွမှုကြီးတွင် နိဂုံးချုပ်သွားသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ကာလမှာကား မည်သည့် Political, Economic Doctrine များမရှိပါ။ ယနေ့အထိဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုမှုလုပ်ငန်းများမှာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၊ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ မျှတရေး၊ အလုပ်အကိုင်နေရာဖန်တီးပေးရေး၊ နေရေးထိုင်ရေးအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ Education၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းများ မြန်ဆန်လျှင်မြန်လာစေရေး၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းငယ်များ တိုးပွားလာရေး၊ လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ရထားများ၊ ဘူတာများ၊ဘတ်စကားများ၊ တက္ကစီများ၊ ကားဂိတ်များ၊ လေဆိပ်များ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရေး၊ မြို့ပြများတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား၊ ရေသန့်ရရှိမှု၊ ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု၊ သန့်ရှင်းသန့်ယပ်မှု၊ မြန်မာလူမျိုးအားလုံးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှု အစရှိသည်ဖြင့် ပါဝင်သည်။
Socialism, Communism နှင့် Capitalism များတွင် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ သဘောသဘာဝမတူညီပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Socialism နှင့် Communism အယူအဆအရ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို Cradle to grave (ပုခက်ထဲမှ သေဆုံးသည်အထိ) အခမဲ့ဆေးကုသခွင့်ပေးမည်ဟု ဆိုသည်။ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တော့မသိ။ သို့သော် အဆိုပါစနစ်နှင့် အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်လာခဲ့သူတို့မှာ နေထိုင်မကောင်းလျှင်ဆေးရုံသွားရမည်၊ အခမဲ့ကုသပေးရမည်ဟူသည့် အယူအဆသာစွဲမြဲနေလေ့ရှိသည်။ Capitalism မှာတော့ မည်သည့် အခမဲ့မျှမရှိ၊ Health care insurance ကို အခြေပြုသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်သူ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို မပြောမီ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးသွားမည့် Political System, Economic System, Education System တို့ကို သေသေချာချာဆုံးဖြစ်ပြီးမှ အများပြည်သူတို့ကို သင်ကြားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အစိုးရမှာ လမ်းပျောက်နေပြီး အချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တို့မှာ Socialism ဖြစ်လိုက်၊ တစ်ချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တို့မှာ Capitalism ဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေသည်။ အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရကို တာဝန်ယူနေသူတို့သည် Vision ပျောက်နေသေးသည်။ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးများ အဆင့်မှာလည်း Strategy အဆင့်ကို မရောက်ပဲ။ လျှင်လျှင် လျှင်သလို နာမည်ကောင်းရဖို့နှင့် ရပေါက်ရလမ်းများနောက်ကိုသာလိုက်နေသည်။
၀န်ကြီးဌာနများဆိုပါစို့။ ၀န်ကြီးတစ်ဦးမှ Initiate လုပ်သော Project များမရှိပါ။ တစ်ချို့ကလည်း လုပ်ရကောင်းမှန်းသိသည်။ ဒါပေမဲ့ Fund မရှိပါ။ Fund မရှိသည်က Budget ထဲတွင် မရှိ၍ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Human Resource Development လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာ Fund မှ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားမှ လာရောက်လှုဒါန်းမှုများကိုသာ စောင့်နေရသည့် သူတောင်းစားများသဖွယ်သာ ရှိနေပါသည်။ မြေပေါ်မြေအောက်သယံဇာတ များအလျှံပယ်ကြွယ်ဝသည်ဆိုသည့် မြန်မာလူမျိုးများ နွားနို့လေးတစ်ခွက်တောင် မသောက်ရပါ။ တစ်ချို့ဝန်ကြီးဌာနများမှာ မလိုသည့်နေရများတွင် ၀န်ထမ်းများပိုနေပြီး၊ လိုသည့်နေရာများတွင် အလုံအလောက်မရှိပါ။ Budget အရ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခန့်ထားခွင့်မရှိ၍ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများကို မပြောမီ ယနေ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနှင့် ပီပြင်ခိုင်မာသည့် Vision, Mission များကို ဆွေးနွေးပြီးမှာ ၀န်ကြီးဌာနအားလုံး၏ Vision, Mission, နှင့် Organization Structure များကို အရင်ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အပိုင်း (၁) တွင်ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
အမြီးကျက် အမြီးစား .. ခေါင်းကျက် ခေါင်းမစားပဲ တစ်ဂေါင်လုံးကျက်အောင်စောင့်နေရင် တူးသွားမှာပေါ့.. :harr:
-လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန
-ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန
ဘယ်ဌာန က စ ကြမတုန်းဟင်။
ပြောရရင်.. လူထုကိုယ်တိုင်ကိုက.. ဆိုရှယ်လစ်ဇင်အတွေးအခေါ်တွေ.. ပိနေတယ်ထင်မိတယ်..
အစိုးရက.. Big Government ဖြစ်ဖို့အတင်းတိုးတင်နေသလိုဖြစ်တာပေါ့..
တကယ်တော့.. အစိုးရကိုယ်တိုင်မှာလည်း.. ဘက်ဂျက်ကမရှိ…
တကယ်တော့ ဆက်ကူး အမတ်ကူး ကာလမို့ပြောရင်မှန်မယ်ထင်တယ်။
အဲဒီ ဆက်ကူး အမတ်ကူး တွေလျော့နည်း ပပျောက်သွားမယ့်အခ်ျိန်ကို စောင့်နေမိတယ်လေ။
အဲဒီအချိန်ဟာ ကြယ်သာယာတွေလည်းလင်းလို့ လမင်းကြီးလည်းထိန်ထိန်သာလို့ ကောင်ကင်ကြီး ကလည်းမြူတိမ်ကင်းလှလို့ ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအချိန် အဲဒီအချိန် ကို စောင့်စားရင်းစောင့်မျှော်ရင်း……….
ကျုပ်သိတဲ့ ဌာန ၊ လက်ထောက်အဆင့်တွေ ခဗျာ တစ်နိုင်ငံလုံးစာအမှန်အကန် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ဌာန ပေါ့ ၊ အဲ့ဌာန ဆိုရင် သိပ်သနားစရာကောင်းတယ် ။ မာစတာဂျစ် အစုတ်လေးတွေနဲ့၊ အစိုးရတာဝန်နဲ့ ခရီးထွက်ရရင် ၊ ခွင့်ပြုတာက ဂါလံ ၃၀ ၊ တစ်ကယ်တမ်း ကုန်တာက ဂါလံ ၅၀ကျော်
ကိုကိုခိုင်ပြောသလိုပဲ ဆိုရှယ်လစ်ဇင်အတွေးအခေါ်တွေ.. ပိနေတယ် ဒါပေမဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေမှာတော့ ကိုလိုနီ စရိုက်ကိုဖျောက် တဲ့ တစ်ကယ်တမ်းဖြစ်ရမှာက ဆိုရှယ်လစ်စရိုက်ကိုဖျောက် ဖြစ်ရမှာ အဲဒိတော့က သမ၀ါယမ ၀န်ကြီဌာနကို အရင်ဖျက် သမ၀ါယမဆိုတာက ဆိုရှယ်လစ်ရဲ့ဒုတိယမဏ္ဍိုင်လို့ ကျောင်းတုန်းက ဆရာမသင်ခဲ့ဖူးတယ်
ဆိုရှယ်လစ်တွေ ကွန်မြူနစ်တွေ တော့သိဘူးဗျာ အခုအခြေအနေကိုစိတ်ပျက်နေတာတော့အမှန်ပဲ
အစိုးရဟာ ပြသနာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ ဗရမ်းဗတာဖြစ်နေတယ် တိုင်းပြည်ကဟိုကဆူလိုက် ဒီကဆူလိုက် ၀ါးအစည်းပြေသလိုဖြစ်နေတယ် စိုးရိမ်နေမိတယ် အရာရာ ဆန္ဒပြချင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရယ်၊
တတ်ယောင်ကားနဲ့ လျှောက်ပြော လျှောက်လုပ်နေတဲ့ ဆရာ့ ဆရာ တွေရယ်၊. ကိုယ့် စိတ်ဓါတ်နဲ့မကိုက်ရင် ကိုယ့်အကြိုက် ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့မတူရင် ရန်သူလိုလုပ်တတ်ပြောတတ်တဲ့သူတွေရယ်၊ ကိုယ်လည်းမလုပ်တတ် လုပ်တတ်တဲ့သူကြတော့လည်း အပြစ်ရှာနေတဲ့သူတွေရယ် ဒီလိုလူတွေစုနေတဲ့တိုင်းပြည် ပျက်တာပဲအေးတယ်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနင်းချေခံထားရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးရလဒ်တွေက အခုမှအကုန်စုပြီးပြတာပဲ။ ပြသနာရဲ့ရင်းမြစ်တောင်မနည်းလိုက်နေရတဲ့ အခြေအနေမှာ အရာရာအကောင်းတွေပဲချက်ချင်းလိုချင်ဖြစ်ချင်မနေကြပဲ စည်းလုံးစေချင်တာ။ အခုတော့ အခုတော့….။
ဘာမှတော့ ထွေထွေထူးထူး မဆွေးနွေးတတ်လို့ မပွားတော့ပါဘူး……
ခင်ဗျားတွက်ပွားပေးတယ်ဆိုပေမယ့် ပွိုင့်ကိုတော့ ကျုပ်ဘဲယူမယ်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ ( သဂျီး )
အတန်းကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို စစ်ပညာသင်ပေးမယ်
ပြီးရင် လူရည်ချွန်တွေ စံပြလုပ်သားကြီးတွေကို ရွာပတ်ပြီးပြစားမယ်
တိုင်းပြည်ကလည်း တစ်ခါမှ ရင့်မလာဘူး၊
တစ်ခုတော့ရှိတာက အခုအစိုးရနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်တိုင်က
အရောင်စုံ အသားစုံ စပ်ကျားကြီးမို့
ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်က စပ်ထမီ ၀တ်ထားတဲ့ အရူးမနဲ့ တူနေဦးမှာဖြစ်ကြောင်း…
ခိုင်မာသည့် Vision, Mission များကို ဆွေးနွေးပြီးမှာ ၀န်ကြီးဌာနအားလုံး၏ Vision, Mission, နှင့် Organization Structure များကို အရင်ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အပိုင်း (၁) တွင်ရေးသားလိုက်ရပါသည်။